Ithegi: ukhuseleko | Martech Zone
Zithini iindidi zeWebhu (ziMnyama, zinzulu, umphezulu, kwaye zicacile)?
NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2021 NgoLwesihlanu, Matshi 5, 2021 Douglas Karr
Asisoloko sixoxa ngokhuseleko kwi-Intanethi okanye kwiWebhu eMnyama. Ngelixa iinkampani zenze umsebenzi olungileyo wokukhusela uthungelwano lwangaphakathi, ukusebenza ekhaya kuye kwavula amashishini kwizoyikiso zokungena kunye nokugenca. I-20% yeenkampani zichaze ukuba bajongane nokophula umthetho ngenxa yomsebenzi okude. Ukunyamezela ekhaya: Ifuthe le-COVID-19 kukhuseleko lweshishini Ukhuseleko lwasesecaleni aluselilo nje uxanduva lwe-CTO. Kuba ukuthembela yeyona nto inexabiso kwi
Yongeza ukondla iPodcast kwangaphandle kwiiFidi zeWebhusayithi yakho yeWordPress
NgeCawa, Meyi 10, 2020 NgeCawa, Meyi 10, 2020 Douglas Karr
Ungayipapasha njani ipodcast eyabelwe ngaphandle njengokutya kwesiko ngaphakathi kwimeko yakho yeWordPress.
NgoLwesihlanu, Meyi 11, 2018 Natasa Djukanovic
Ngaba uyazi ukuba malunga ne-93% yabasebenzisi baqala amava abo oku-web ngokuchwetheza umbuzo wabo kwinjini yokukhangela? Eli nani liphezulu akufuneki likothuse. Njengabasebenzisi be-intanethi, siqhele ukuhlala lula ekufumaneni kanye le nto siyifunayo kwimizuzwana ngeGoogle. Nokuba sikhangela ivenkile evulekileyo ye-pizza ekufutshane, isifundo sendlela yokuluka, okanye eyona ndawo yokuthenga amagama e-domain, silindele ukuba kwangoko
Uluhlu lwee-ecommerce Uluhlu lokutshekisha: Eyona nto kufuneka uyiThengile kwiVenkile yakho ye-Intanethi
NgoLwesine, uJuni 29, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Esinye sezona sithuba sithandwa kakhulu ekwabelaneni ngaso kulo nyaka ikuluhlu lwewebhusayithi yethu ebanzi. Olu infographic lulandelelo olulungileyo yenye iarhente enkulu evelisa infographics engakholelekiyo, intengiso ye-MDG. Zeziphi izinto zewebhu ezentengiso ezibaluleke kakhulu kubathengi? Yintoni ekufuneka yenziwe ziimpawu, ixesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali ekuphuculeni? Ukufumanisa, sajonga uninzi lophononongo lwamva nje, iingxelo zophando kunye namaphepha emfundo. Ukusuka kolo hlalutyo, sakufumanisa oko
Iingcebiso ezi-3 kubarhwebi ukuze baKhusele iiPassword zabo zeMithombo yeendaba
NgeCawa, ngo-Epreli 30, 2017 NgoLwesibini, Meyi 2, 2017 Douglas Karr
Kule veki iphelileyo, besizama ukufumana igama eligqithisiweyo leakhawunti ye-YouTube yomthengi. Akukho nto iyenza mbi ngakumbi kwaye imosha ixesha lomntu wonke kunokwenza oku. Ingxaki yayiyeyokuba umqeshwa olawula iakhawunti yakhe ngequbuliso wayishiya inkampani- kwaye hayi ngokwemigaqo efanelekileyo. Senze konke okusemandleni ethu njengomlamli ukuzama ukufumana iphasiwedi, kodwa bathi abasazi ukuba yintoni na ngoku. Ye